Kuike-Automatic Machine tolidda, Mashiinka Maaskaro Wajiga, Soosaaraha Mashiinka otomaatiga ah | Kuike
U heellan soo saarista mashiinka otomaatiga ah ee caqliga leh ee dharka Knitted.
Mashiinka Mashiinka Tooska ah
Qalabka Warshadaha Caafimaadka
Mashiinnada tolida oo otomaatiga ah loogu tolo dharka
Ka dib sanado badan oo aan sii waday sahaminta iyo baaritaanka habka wax soo saarka iyo qalabka warshadaha dharka tolida, waxaan soo saarnay mashiinno tolmo kala duwan oo otomaatig ah.
& Mashiinka tolmada tooska ah ee warshadaha oo si weyn u buuxiya shuruudaha macaamiisha.
Mashiinka Mashiinka Tooska ah ee ugu fiican dharka kore ee kore laga soo bilaabo qiimaha warshadda ee KUIKE
Astaamaha gaarka ah: ku qalabeysan madaxa mashiinka Pegasus, otomaatig ah, fududahay in la shaqeeyo, keydinta tamarta, caqliga, Waxqabadka xasilloon, hogaaminta warshadaha, shatiyado badan oo u gaar ah oo leh, heer aad u hooseeya oo aad u hooseeya, oo si diirran ugu amaanay macaamiisha caanka ah ee gudaha iyo dibaddaba , hagaajinta hufnaanta tolida, tayada iyo kartida.
Mashiinka Gawaarida Gawaarida ugu Fiican ee loogu talagalay surwaalka laga soo qaado qiimaha warshadda ee KUIKE
Astaamaha tooska ah ee tooska ah
Kufsiga tooska ah ee tooska ah ee loo yaqaan 'Cuntect' ee ugu wanaagsan ee loo dejiyo QK-360 qiimaha warshad -. Waxay bixisaa wax kharash gareeya oo wax ku ool ah oo qiimo leh.Saldhig shaqo otomaatig ah oo loogu talagalay tolidda furitaanka lugta iyo feef feeraha. Mashiinkani wuxuu ku qalabeysan yahay aaladda jiidista rontersl si uu u hayo maro-galka inta lagu jiro hawlgalka. Nidaamka kontaroolada elektiroonigga ah si otomaatig ah ayuu u hagaajiyaa cabirka. Ka hortagga pneumatic iyo xakamaynta otomatiga ah ee korantada, nidaamku wuxuu ku qalabeysan yahay qalab otomaatig ah oo aalad ah. aaladda ballaarinta otomaatigga ah, xariiqda xiirashada otomaatiga ah, iwmhttps://www.quickautomaipipipment.com/
Otomatiga si otomaatig ah oo mashiinka loo yaqaan 'QK-350'
Otomatiga si otomaatig ah oo mashiinka loo yaqaan 'QK-350'Tilmaamaha: Mashiinkan waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo badhanka-funaanadda shaati. Dhererka cabirka saxda ah, looma baahna cabirka gacanta, hawlgal fudud, tolidda otomaatiga ah, helitaanka otomaatigga ah. Qalabkani wuxuu ku qalabeysan yahay madaxa madaxa, xakamaynta cabirka otomatiga ah, colar tolan oo tolo ah, quudinta otomaatiga ah iyo helitaanka.Codsi: Waxay ku habboon tahay in feedhka feedhka iyo kulan cad.
Adeeggeena Mashiinka otomaatiga ah
U hogaansanaanta falsafada ganacsiga ee "horay u ogaanshaha, mustaqbalka iyo mudnaanta", Degdeg ayaa suuqa u qaadeysa hage ahaan oo aan la soconaa baahida macaamilka, waxaan ku qaadanay 7 sano si aan u horumarino qalab si otomaatig ah u shaqeeya oo loogu talagalay dharka tolida (mashiinka tolida dharka) (Mashiinka otomaatiga ah) sida mashiinka kuleylka si buuxda otomaatiga u ah, mashiinka feeraha sare, mashiinka kuleylinta hal xabbo iyo mashiinka irbadaha badan iyo wixii la mid ah, taasoo si weyn u wanaajisay wax soo saarka wax soosaarka ee shirkadaha la xiriira
Ka hortaga Cudurka saf-marka ah
Waqtigan xaadirka ah, Quick wuxuu xiriir dheer la leeyahay shirkado badan oo caan ah gudaha iyo dibedda, sida kooxda 'crystal Estates group' ee Hong Kong, Hong Kong Esquel, Jiangsu Tiyuan, kooxda Shenzhou, Semir, ANTA, 361 °, Hongxing, Step, Jordan iyo wixii la mid ah.
Kordhinta tayada sare leh ee qiimaha gunta-DongGuan Quick Automatic Qalabka Co., Ltd
KUIKE QAADASHADA SARE EE QIIMEYNTA GARASHADA GOOBTA DOLGuan Quick Automatic Qalabka Co., Ltd
Mashiinnada maaskaro ayaa dhammaantood iib ah
Mashiinnada maaskaro dhammaantood waa iib yihiin Qiimaha iyo tayada dhammaantood waa la damaanad qaaday. Ficil jireed majiro wax aan qiimo lahayn, Kaliya qaado aragti kale si aad ugu cadeyso haddii aadan qabsan iibka inuu ku socdo wadadaada
KF94 Mashiinka Maaskaro Wejiga QK-KF94-SF60
Mashiinkaani wuxuu ku qalabeysan yahay qalabka wax lagu duubo, mashiinka jirka, khadadka wax la geeyo iyo dhegta loox alxanka meesha, waa hal-jiid-mid mashiinka maaskaro loop dhegta sare oo leh mashiin buuxa oo loogu talagalay soo saarista waji-furka qalliinka la tuuri karo, iyo maaskarada ayaa u ekaatay si loogu daboolo heerka waji-ka-tuurka ee leh laba lakab oo ah dhar aan tolmo lahayn iyo lakabka dhexe oo dhalaalaya-dhar halkaas ku yaal.
Dongguan Quick Automatic Qalabka co., Ltd, oo la aasaasay 2014.
Ma tahay shirkad farsamo heer sare ah oo diiradda saareysa horumarinta iyo soo saarista dharka tolida qalabka otomaatiga ah, mashiinka tolida ee dharka tolida）. Cilmi baarista iyo sameynta waa qodobadeena hormarinta aasaasiga ah, Dhaqaale deg deg ah ayaa ka badan 10% sanadle ah si loo horumariyo loona ballaariyo khadadka alaabooyinka kala duwanaanta cusub, hadana waxaan heysanaa xirfadle iyo hufnaan r& d iyo kooxda wax soo saarka.
Ka dib sanado badan oo aan sii waday sahaminta iyo baaritaanka habka wax soo saarka iyo qalabka warshadaha dharka tolida, mashiinada harqaanka tolida）, waxaan soo saarnay makiinado kala duwan oo otomaatig ah oo si otomaatig ah wax ugu toosiyo kuwaas oo si weyn u buuxiya shuruudaha macaamiisha.
Hadaad Su'aalo Badan Qabtid Noosoo Qor